Love Fashion Nail, 2238 Oneida St, Denver, CO (2020)
Home > United States > Denver, CO > Nail Salons > Love Fashion Nail
Love Fashion Nail
9724 E Colfax Ave, Aurora
3394 W 66th ave, Denver
4000 Colorado Blvd, Denver
2920 E Colfax Ave, Denver
10718 E Colfax Ave, Aurora
2812 E. 6th Ave, Denver
3403 E 1st Ave, Denver
5305 Leetsdale Dr, Denver
2229 Oneida St, Denver
Alchemic Coaching with Lauren A.
7171 East Colfax Ave, #410, Colorado Springs
1955 Ulster St, Denver
7233 E Colfax Ave, Denver
1955 Ulster, Denver
2232 oneida street, Denver
6107 E 22nd Ave, Denver
Bang Salon At Park Hill
2200 Kearney St, Denver
2251 Kearney St, Denver
7341 E 29th Ave, Denver
1654 Quince St, Denver
today my teacher and me desing
MDY. ၅၆လမ္​း၄၁x၄၂ၾကား ဒီ​ေန႔ဆိုး​ေပးလိုက္​တဲ့အ​ေရာင္​စိုစို​ေတာက္​​ေတာက္​​ေလး 09402534414
Open Daily (8:30 AM to 8:30PM)
💅💅love fashion nail ကိုအမဲအားပေးကြတဲ့ချစ်ဧည်သည့်များအတွက် LFN ရဲဝန်ဆောင်မူများကို
☎️phone Booking တင်ခြင်းဖြင့်စနစ်တကျ ဝန်ဆောင်မူများပေးနေပါပြီနော်
☎️ဖုန်း booking တင်ပေးရန်
တစ်ရက်ကို ၅ ယောက်သာလက်ခံပါတယ်ရှင့်
တချိန် ထဲပြုလုပ်ရင် ၂ယောက်ပါရှင့်
📌မှတ်ချက် booking တစ်ရက်အချိန်တိကျကြိုတင်ယူပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်ရှင့်🙏🙏🙏
ရှိ ရင်အောက်မှာ ကော့မန်း ☝️လက်ကလေးတောင်ပြပေးပါရှင့်🥰
[11/04/20] love fashion nail ကိုအမဲအားပေးကြတဲ့ချစ်ဧည်သည့်များအတွက် LFN ရဲဝန်ဆောင်မူများကို
🙋💁မန်းတလေးချစ်မမတိုရယ် ကိုယ်ဗစ်ကာလမှာ Online ပေါ်
ပစ္စည်းစျေးရောင်းတဲ့အချိန် လက်သည်းလှလှ လေးပြလိုရအောင် Order လုပ်လိုရပါတယ်ရှင့်
💁ချစ်မတို့ လက်သည်းအမဲတမ်းပုံဖော်နေကျတဲ့မမများအတွက် ကိုယ်လက်သည်းကိုအရောင်လေးမပါရင် ကြည့်လိုမကောင်းဘူး မလား မိန်းကလေးတိုင်း အလှပြင်ရရင်စိတ်ကျေနပ်တယ် ခု ကိုယ်ဗစ် 19 ကာလမှာ ဘယ်ဆိုင်မှတော့ဖွင့်လိုမရဘူး ရှင့် ဒါပေမဲ့ ဆိုင်မှာခါတိုင်းလို လာလုပ်တော့မရဘူး ရှင့်
လက်သည်းအတု ပေါ်မှာ Order သဇိုင်းလုပ်ပေးလိုရပါတယ်ရှင့် ကိုယ်ပုံစံ ကြိုက်တဲ့သဇိုင်းလေး ပြောပြီး မစင်ဂျာမှာ ပို့ပေးလိုက်ရင် ရပြီ
1 💅U.V gel ဗြောင်ပဲဆိုးဆိုး
2💅 U.V gelသဇိုင်းပဲဖော်ဖော်
😍ဗြောင်U.Vလက်သည်း 10 ချောင်းကိုမှ 9000Ks +အတု
ပုံမှန်စျေးဆိုရင် 15000 ပါ
😍သဇိုင်းဖော်ရင် 13000+အတု free ပါရှင့်
ပုံမှန်စျေးဆိုရင် 18000 ပါရှင့်
ကိုကြိုက်တဲ့အရောင် လေး သဇိုင်လေး လက်သည်းတုကပ်ကော်နဲ့ကပ်ပေးယုံပဲနော် အချိန်လည်းမကုန် အန္တရယ်လည်းကင်း ပါတယ်ရှင့်
အခုသင်ထားပေးတဲ့သဇိုင်းနှစ်ကြိုက်ခဲ့ရင် Save ယူပြီးOrder လုပ်လိုရပါတယ်ရှင့် 👍👍
page ကို Like & Share လုပ်ပေး 100 Like ရရင် လက်သည်းတစ်စုံ မေတ္တာလက်ဆောင်ရမယ်နော်
❤️ Love fashion nail ❤️
ခါတိုင်းနှစ်ဆို 🎇🎆သတင်းကျွတ်တော့မယ် ဧည့်သည်အတွက် 💅လက်/ခြေသည်းသဇိုင်းလှလှလေးတွေဖော်ပေးနေရပြီ အရမ်းကိုသတိရတာပဲ အခု😷ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကြောင့် လူတိုင်းလူတိုင်းစိတ်ရောလူရောအရမ်းပင်ပန်းလာပါပြီ 🚫ညွန့်ကြားချက်အရ ဆိုင်လည်းဖွင့်လိုမရ ချစ်ဧည့်သည်လည်းဖုန်းခဏခဏဆက်လာမေးတယ် ဆိုင်ပြန်ဖွင့်ရပြီလားလိုမေးလာတော့ ကိုယ်ချစ်ဧည့်သည်ကိုလုပ်ပေးချင်လိုက်တာ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်သဘောနဲ့ဆိုလုပ်ပေးပိုင်
ခွင့်မရတဲ့အတွက် ချစ်ဧည့်သည်များအားလုံးမိတ်သစ်ရောမိတ်ဟောင်းရော နားလည်ပေးကျပါရှင့် ဆိုင်ကဘယ်ရက်ဘယ်လ ပြန်ဖွင့်ရမှာလည်းဆို ကျွန်မအတိအကျပြောလိုမရသေးပါဘူးရှင့် အထက်တရားဝင်စာကြော်ငြာထွက်လာမှ အဲ့ဒီအချိန်ကျမှဆိုင်ပြန်ဖွင့်လိုရပါမယ့်ရှင့် ဆိုင်ပြန်ဖွင့်ရတဲ့ရက်လည်း ပြန်ကြော်ငြာပေးမယ်ရှင့်
love fashion nail မိသားစု
💅လက်သည်းအလှပြင်ဆိုင်အားလုံးဆိုင်ပိတ်သိမ်း ရှိမရှိ စာနောက်တစောင်ထပ်ရောက်လာပါပြီရှင့်
အခု ဒုတိယလှိုင်း Covid 19များပြားလာသောကြောင့် မိတ်သစ်မိတ်ဟောင်းများအားလုံး အထူးဂရှစိုက်ကြပါ အပြင်ထွက်တိုင်း mask တပ် လက်ခဏခဏဆေးပါ အရေးမကြီးရင်အိမ်ပြင်မထွက်ကျပါနဲ့
Covid 19 ပြီးဆုံးတဲ့တစ်နေ့မှာ မိတ်သစ်မိတ်ဟောင်းများအားလုံးကျန်းကျန်းမာမာပြန်ဆုံပါစေရှင့်
💅love fashion nail💅
မနက်ဖြန် ( 14 .9.20 )
🙏🙏မိတ်သစ်မိတ်ဟောင်းများအားလုံး မလိုအပ်ပဲအပြင်မထွက်ကျပါနဲ့🏠 အိမ်မှာပဲနေပါ မဖြင့်မနေထွက်ရရင် Mask😷😷 တပ်ကျပါ လက်ခဏခဏဆေးကျပါ အားလုံးလည်းဂရှစိုက်ကျပါ ရှင့် Covid-19 ပြီးဆုံးတဲ့တနေ့မှာ
💅love fashion nail💅 မိသားစုပြန်ဆုံတွေ့ရပါစေ လို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါရှင့်
ဆိုင်ပြန်ဖွင့်မဲ့ရက်ကို page မှာပြန်ကြောငြာပေးပါ့မယ်ရှင့်
ဒီနေ့အစောကြီး အရက်ပျံဒါဝါတစ်သျူး ထုပ်ကြီး (၃) ထုပ်ထပ်အားပေးသွားပါပြိကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်🥰🥰
💯75% အရက်ပျံဒါဝါတစ်သျူးလေး တွေနော်
💯ပိုးသတ်ခြင်း ၊သန့်ရှင်းခြင်း၊ ရေဆေးရန်မလို၊
အထုပ်သေး100 ပါ -.10000 ks
ထုပ်သေး 10 -1500 ks
ပစ္စည်းရောက်တာနဲ့ကုန် မရသေးတဲ့စစ် လေးတွေ
Order မှာထားတနာ် ချန်ထားပေးမယ်
🐛အခု Covid 19 ကာကွယ်ဖို့🐛
အထုပ်သေး ၁၀ ထုပ် -1500 ks
အထုပ်သေး100ပါ -10000 ks
ရတယ် အချိန်ကုန်သက်သာစေရန် နာရီဝက်ဖုန်းကြိုဆက်ပေးပါ ဆိုင်ရောက်တာနဲ့ တမ်းလုပ်လိုရအောင်နော်စစ်
💅💅လေပူပူ၊ မိုးရွာရွာ ၊ချစ်ဧည်သည့်အမဲလာရောက်အားပေးတဲ့တွက်ကျေးဇူးပါရှင့်
တခါမှမရတဲ့ မိုးရာသီ pormtion လေးပါနော်
👩👉1 ယောက်လာရင် 20% Off
👩👩👉2 ယောက်တူတူလာလုပ်ရင် 30%off ရမယ်နော်
တစ်ရက်ကို ၂ယောက်ပဲလက်ခံသည် တရက်ကြို ပိုကင်ယူလိုရပါတယ်ရှင့်
နောက်တစ်ခုကျတော့ Pormtion like & share အစီစဥ်လေးပါဝင်ပီး အရမ်းတန်တဲ့ Eyebrow Tattoo စျေးနှုန်းလေးကိုရယူလိုက်ကြရအောင်
ဒီ Post ကို Screer shot ရှိက်ပြိး like & share အယောက် 50 ပြည့်ရင် ကော့မန်းမှာပို့ပြိး 50%off ရယူနိုင်ပါသည်
ဒီနေ့ဧည့်သည် များတော့💅💅လက်သည်းခြေသည်း ပုံအများကြီးမရှိက်လိုက်ရဘူး🥰😍ခဏ အားသာနဲ့ ၂ ပုံပဲရှိက်ဖြစ်တယ်
2238 Oneida St
Other Nail salons in Mandalay (show all)
Organic NailArt MDY
29 Street, Between 79 & 80 Roads
16 Miles, Mandalay To Pyin Oo Lwin Road.
SKⅡCounter,Morning Pearl Beauty Centre
SHINE's HOME SWEET HOME VILLA
The Magics Nail Shop
83 Street ,between 37*38 Str,Mandalay
Gel Nail Polish , Uv Lamp & Nail Accessories Shop Supply
32st Bet 74st& 75st
New Girl Beauty Supply and Training
No-180, 79 Street, Bet 32 X33 Street
Acrylic/ Gel Nails Product, Organic Body Spa
Unofficial: Snow White - Nail art
66လမ်း*67လမ်းကြား,သရဖီလမ်း(၁၀၅ လမ်း)မန္တလာသီရိ ဘောလံုးကွင်း အရှေ့ဘက်